पथरीमा मृत्यु शृंखला शव भेटिन्छ, कारण भेटिँदैन, आखिर किन यस्तो भैरहेछ ? – " कञ्चनजंगा News "
पथरीमा मृत्यु शृंखला शव भेटिन्छ, कारण भेटिँदैन, आखिर किन यस्तो भैरहेछ ?
No Comments on पथरीमा मृत्यु शृंखला शव भेटिन्छ, कारण भेटिँदैन, आखिर किन यस्तो भैरहेछ ?
उत्तरी मोरङका पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पछिल्लो समय ‘मृत्युमार्ग’ बनिरहेको भन्दै स्थानीयवासी त्रसित छन्। एसपी मनोजकुमार केसी भने यस्ता घटना अन्यत्र पनि हुने भएकाले यसलाई स्वाभाविक मान्छन्। ‘यस्ता घटना यहाँ मात्र भएका होइनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँको बढी हल्लाखल्ला भएको मात्र हो। प्रहरीले सबैको अनुसन्धान गरेको छ। सुरक्षाप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ।
← अर्चना पनेरुको कमाई प्रतिदिन८५ हजार भारु, हेर्नुहोस → गिरी एन्ड ग्याङद्वारा कोलम्बसको बेइज्जत